Fandinihana tranga vaovao | Hanan-dranomasina
Fitsapana tranga vaovao
Oct 23, 2019 | Vaovao
Mitantana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ho an'ny haran-dranomasina sy ny fanamafisana ny ala. Sary © Reef Check Malaysia
Nampiana teo amin'ny tranokalan'ny Internet misy antsika ny fanadihadiana momba ny raharaha vaovao misy paikady fitantanana mahomby.
Hatramin'ny 2006, ny vatany 50,000 + izay misy karazany mihoatra ny karazana 50 dia naparitaka ary nafindra indray tany amin'ny haran-javaboary tao amin'ny vohitra MPAs, ary ny tanora dia nahazo fiofanana fototra amin'ny teknika fampielezana ny valan-javaboary lafo, ny ekolojia ary ny fauna, ary ny fampidirana ity asa ity fitsangantsanganana snorkeling. Hamantatra bebe kokoa
Ny fiovan'ny toetrandro dia antenaina fa hisy fiantraikany ratsy amin'ny rano ara-pahasalamana sy ny rano amin'ny lafiny ara-pahasalamana amin'ny lafiny maro any atsimo andrefan'i Puerto Rico ary ny hetsika fitantanana ireo haran-dranomasina izay heverina na ampiharina hatreto dia nifantoka tamin'ny fepetra efa nisy. Araka izany, ny fanamby dia amin'ny fomba ara-teknika sy mangarahara ny famolavolana làlan-dranomasina mahay sy ny fitantanana ny vatohara. Ny Fitaovana Famolavolana Adaptation dia nampiasaina tany Guánica Bay Watershed mba hampidirana ny famoronana marani-tsaina ao anatin'ny hetsika fitantanana azy ireo amin'ny alàlan'ny fijerena ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro amin'ireo mpitan-tsaina ara-tontolo iainana sy ny fiantraikany amin'ny fitantanana mahomby. Hamantatra bebe kokoa
Avy amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny asa: fanorenana sosialy sy ara-ekolojika manoloana ny fiovan'ny toetrandro
Ao amin'ny nosy Tioman, ny valin'ny fanamarinana faharetana momba an'i Malaysia dia nampiasaina ho laharam-pahamehana ny hetsika fitantanana. Nisy fandaharana iray natomboka hampihenana ny fiantraikany eo an-toerana ho an'ny vatohara, manangana ny fahaizan'ny vondron'olona ifotony ary hampidirana ny vondron'olona ao anaty valan-javaboary sy ny fitantanana. Ny fonon-tanety mahery manodidina an'i Tioman dia nitombo ny 12% hatramin'ny 2013, raha ny fanadihadiana kosa dia naneho ny fihenan'ny 10% any amin'ny toerana hafa any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Peninsular Malaysia. Hamantatra bebe kokoa